Itshe Elincane Elincane
Ofeleba & Sills & izesekeli
Gravel & Pebble itshe
Itshe Elimatshe Amatshe
Amaphethini kaMose Wetshe
Ungalusebenzisa kanjani uKhisimusi omuhle emazweni ahlukahlukene?
Ukhisimusi omuhle umngane wami, Sekuvele kumaphakathi noDisemba. Ingabe uKhisimusi ukude? Ngaphambi kokuba kufike uKhisimusi, sikufisela ngokushesha futhi sikufisela umsebenzi ojabulisayo nomndeni ojabulayo onyakeni omusha Ngiyabonga ngokusinaka kwakho futhi sethemba ukuthi sizoqhubeka nokushintshana ngo-2021. Asikhulume ...
Ukusetshenziswa kwetshe lokwakheka komhlaba emvelweni
Okwetshe le-landscape, abaklami bathandana nobuciko bemvelo nobuciko bamatshe. Ubulula bakudala bokuqhekeka komhlaba kanye nephethini yemvelo kwephula ukuqhubeka kwangempela, okuletha umthelela omkhulu wokubuka nomphumela ongalindelekile. Ubuciko bemvelo Ubuso bemvelo betshe buhlobo ...
Ngabe senza iphutha ekubhekaneni nezinkinga zamatshe?
Umngani wami wake wangibuza ukuthi ngabe ngangikhathele kakhulu yini ngenkathi ngenza umsebenzi wokukhiqiza nokukhiqiza imboni yamatshe iminyaka engaphezu kwengu-20? Impendulo yami inguyebo, “ngikhathele, hhayi ngokuvamile ngikhathele, kodwa ngikhathele kakhulu.” Isizathu sokukhathala akuyona into enzima futhi enzima yokukhiqiza, kepha uchungechunge o ...
Bhalisela i-Newsletter yethu: